Intlonti ezi Caweni | News24
Intlonti ezi Caweni
Umseki wombutho Kingdom Queen nokwangumfundisikazi ePum Tree House Ministries Nokwanda Makwela uthetha nogxa bakhe ngexesha lentlanganiso. Umfanekiso: unathi obose
Amalungu eenkonzo ezahlukeneyo, kunye nemibutho ezimeleyo, adibanise iintloko kwisikolo samabanga aphakamileyo sase Gugulethu, iNtshukumo Comprehensive ngoMgqibelo odlulileyo, ngelinge lokugwadla umba wokuhlukunyezwa kwabantu ababhinqileyo ngokwesondo ezinkonzweni.
Le ndibano ibiququzelelwe ngumbutho iKingdom Queen, eseGugulethu, nojongene nokuxhobisa uluntu, ingakumbi abantu ababhinqileyo, ukuba bazimele.
Lo mbutho ukwalwela ubulungisa kwiinkundla zamatyala, kwaye ukhuthaza umthetho ukuba udlale indima yawo.
Ezinye zeenkonzo kunye nemibutho ebeyinxalenye yale ndibano, ibiyi Wesley Guilders, MaAfrika Ministries, ANC Women Ministries, Ilitha Labantu, Amalungisa kunye nenkonzo yesipolisa yase Gugulethu.
Ongumseki walo mbutho, uMfundisi uNokwanda Makwela, uchaze le ntlanganiso njengendlela elungileyo yokujongana nemeko ezinobuzaza ezinkonzweni.
U-Makwela, nophuma kwibandla iPalm Tree House Ministries, uthe zininzi izinto ezimanyukunyezi ezenzeka ezicaweni.
Uthe ixesha elininzi ezi zinto ziye zinyathelwe ngenyawo. “Into ebangela ukuba sidibane apha kukuzama ukuba size nezisombululo kwezingxubakaxaka zigqubayo ezinkonzweni,” utshilo. “Enye yazo kukuxhatshazwa kwamantombazana ngokwesondo ngabefundisi.”
Lo mbutho usekwe emva kokuba intwazana ethile, egama lingu Cheryl Zondi, yeza phambili kwinkundla zamatyala imangalela owayesakuba nguMfundisi wakhe, uTimoty Omotoso weCawe iJesus Dominion International, nezinze eDurban.
U-Zondi wazenzela indumasi xeshikweni exelela ilizwe lonke ngokuxhatshazwa yile ndedeba sukela oko wayene 14 leminyaka.
U-Makwela uthe ngoMgqibelo: “Baninzi abantwana abaze kum bexela indlela abaphathwa ngayo ngabefundisi babo ezicaweni, besithi babalala ngenkani. Abanye bamangala emapoliseni kodwa amatyala zange ahambele ndawo.”
Wongeze ngelithi oku kubangelwa kukuba uninzi lwamaxhoba aluniki bungqina bubambekayo.
U-Colonel Ntombozodwa Cupido wama polisa ase Gugulethu ugxeke abaProfeti abasebenzisa icawe ukwenza izinto ezimbi; watsho ekhuthaza uluntu ukuba luxelele amapolisa nganto yonke abangayiqondiyo eyenzekayo ekuhlaleni.
“Nawe ungummelwane unelungelo lokuya emapoliseni uyomangala xangaba ubona umelwane wakho exhatshazwa. Amaxesha amaninzi abenzi bobubi iba ngabantu esibaziyo nabakwazizo nezihlobo zethu.
Sukuvumela omnye umntu akuxhaphaze, phakama ngoko nangoko uyomangalela,” uthethe watsho uCupido.
Uthe akukho namnye umntu ekufanele alawule impilo yomnye umntu.
U-Nondumiso Mzukwa, nobe mele umbutho Ilitha Labantu, uchaze lo mba wohlukumezeko loo mama namantombazanyana njengowothusayo, nokhathazayo emphefumlweni.
Ukwaxelele le ndibano ngezinto abazenzayo bengumbutho ukunceda abantu abaxhatshazwayo.
“Thina singumbutho Ilitha Labantu sisebenza ngamandla ngabantu abaxhatshazwe ngokwesondo nangokubethwa, sibanike inkxaso. Ukanti sikwanabo nonontlalontle abathi babancede ngokubacebisa kwingxaki zabo,” utshilo uMzukwa.